दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान, ६ महीनामा १९ लाख बाँडियो | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान, ६ महीनामा १९ लाख बाँडियो
on: २८ माघ २०७५, सोमबार १८:१६ प्रदेश समाचार
दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान, ६ महीनामा १९ लाख बाँडियो
माघ २८, भरतपुर । माडी नगरपालिकाले दूधमा अनुदान वृद्धि गरेसँगै चितवनको माडीमा व्यावसायिक पशुपालन फष्टाउँदै गएको छ । नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ । अनुदान दिन थालेपछि व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्ने किसानको संख्या बढेको छ ।
उत्पादनका आधारमा अनुदानको कार्यक्रम शुरु गरेपछि व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले बताए । माडीस्थित दुग्ध विकास संस्थानका दुई चिस्यान केन्द्रको तथ्यांकका आधारमा किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न थालिएको हो । दूध उत्पादनका आधारमा ६ महीनामा रू. १९ लाख अनुदान वितरण गरिएको उनले बताए । ‘किसानले रू. १ लाखसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन्,’ ढकालले भने ।
नगरपालिकाले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दूध उत्पादनमा विशेष जोड दिँदै आएको छ । यस वर्ष नगरपालिकाले बाख्राको खोर सुधार, बोयर बाख्रा खरीद र बंगुरको खोर सुधारका लागि पनि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । व्यावसायिक पशुपालनलाई दिगो बनाउन नगरपालिकाले यस वर्ष ३०० बिघा जग्गा भाडामा दिएर घाँसखेती समेत शुरु गरेको नगरप्रमुख ढकालले बताए ।
गत आवमा माडीमा पशुपालनका लागि झण्डै रू. ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएको थियो । सो अनुदान गाईभैंसीको गोठ सुधार, बाख्राको खोर सुधार, बंगुरको खोर सुधार, घाँसखेती, पशुको कृतिम गर्भाधान लगायतमा प्रदान गरिएको छ । यस वर्ष नगरपालिकाले पशुपालनको क्षेत्रमा रू. २ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रू. ८ लाख २० हजार र नगरपालिकाको तर्फबाट रू. २ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको माडी नगरपालिकाका पशुपक्षी शाखा प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘न्यून आयस्तर हुनेका लागि नगरपालिकाले ‘एकभाइ एक गाई’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ,’ उनले भने । गोठ निर्माणका लागि रू. ३५ हजारसम्म र गाई किन्न रू. ४० हजार अनुदान दिइने अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज माडीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भुसालले माडीका किसानको सोचमा परिवर्तन आएको बताए । उनले नगरपालिकाको अनुदान र सहज बजारीकरणका कारण पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढेको बताए ।
माडीमा दैनिक १० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष माडीमा डिडिसीले दैनिक ३ हजार ५०० देखि ४ हजार लिटरसम्म दूध संकलन गर्ने गरेको थियो । यस वर्ष दैनिक ५ हजार लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । एक वर्षको अवधिमा दैनिक १ हजार लिटर दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको नगरपालिकाले बताएको छ । माडीमा करीब २०० व्यावसायीक पशुपालक किसान रहेका छन् । रासस
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार १२:५१
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १५:१६
१० चैत्र २०७५, आईतवार १७:१५
लेबल्सको अनलाइन सेवा शुरू